OwayFresh & Onepay Dec Promo
Oway Fresh & Onepay December Promotion
၁. Oway Fresh တွင်အနည်းဆုံး ၈,၀၀၀ ဖိုးဝယ်ယူပြီး Onepay ဖြင့် ငွေပေးချေပါက 10% Discount ရယူနိုင်မည့်ပရိုမိုကုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ် ၂၀ ကျော်အတွက် အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုအပြင် Oway Fresh တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် 5% OFF Promo Code ကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
(10% ပရိုမိုကုဒ်အသက်ဝင်စေရန် Onepay Mobile Top Up တွင်အနည်းဆုံး ကျပ် 30,000 အသုံးပြုထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုပရိုကုဒ်ကို Onepay App တွင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
10% ပရိုမိုကုတ်အသုံးပြုဝယ်ယူသူများအတွက် Oway Fresh တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် 5% ပရိုမိုကုဒ်ကို Oway Fresh မှပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 5% ပရိုမိုကုဒ်ကို Oway Fresh Website တွင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
၂. 10% ပရိုမိုကုဒ်အသုံးပြုမှုအတွက်အများဆုံးရယူနိုင်သည့် ပရိုမိုးရှင်း ပမာဏ မှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ပေးသွားပါမည်။
၃. ယခုပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၄. Oway Fresh တွင် ပစ္စည်းများမှာယူရာမှ မရရှိသော ပစ္စည်းများအတွက် Refund ကို ရုံးဖွင့်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ပြန်လည်လွှဲပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅. ယခု အစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်တစ်စုံတရာရှိခဲ့ပါက Oway Fresh နှင့် Onepay ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ အတည်ယူမည်ဖြစ်သည်။
၆. ယခု အစီအစဉ် နှင့်ပက်သက်သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုအပ်သလို အချိန်အရွေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း များပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၇. Oway Fresh သို့ Onepay ဖြင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Onepay Customer Care Center ၏ဖုန်းနံပါတ် 09 688383838 (သို့) Onepay Messenger သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို hello@onepay.com.mm သို့လည်း အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
၈. Oway Fresh တွင် ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Oway Fresh Customer Care Center ၏ဖုန်းနံပါတ် 012318939 (သို့) Oway Fresh messenger m.me/owayfresh သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
1. This 10% discount is eligible for purchase of 8,000 Ks and above at Oway Fresh and pay with Onepay. In addition, free delivery, plus extra 5% off promo code for the next purchase will be provided. Free delivery is for over 20+ townships in Yangon.
(To unlock the 10% off promo code, you need to spendaminimum of 30,000Ks on your Onepay Mobile Top Up. The code has to be used in Onepay App.
Oway Fresh will send extra 5% off promo code to those who use 10% off promo code. 5% off promo code has to be used on Oway Fresh Website.)
2. Discount is capped at 1,000 Ks which means maximum discount value one customer can get is 1,000 Ks. Promo code is based on first come, first serve basis.
3. Promotion period is from 1st December to 28th December 2020.
4. For the items that cannot be supplied from Oway Fresh order, refund will be done within7working days.
5. For any dispute that may arise on this promotion, Onepay and Oway Fresh will be deemed final.
6. We reserve the right to amend, cancel, withdraw, terminate or temporarily suspend these terms and conditions for this campaign for whatever reason with no liability to any participants or third parties at any time without notice.
8. For any concerns and issues arise while purchasing goods from Oway Fresh, please contact Oway Fresh Customer Care Center 012318939 or Oway Fresh messenger m.me/owayfresh.